Mayelana NATHI - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
Masenze iCube ilula
Siyabophezeleka ukuletha ubuchwepheshe obufanele be-3D Printing obungasiza
embonini yesikhathi esizayo nokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Inkampani ekhulayo enedumela eliphakeme Ukusebenza namaphrinta amasha we-3D Technological Multi-tool. Intengo eshibhile eshibhile Qhathanisa nolunye uhlobo lomkhiqizo, kepha ungalokothi uyekethise ngekhwalithi.
Ngaphezulu kwesisekelo senkampani eyi-5,000 m2.Umthamo wenyanga wokukhiqiza weqa izingcezu ezingama-500 imigqa yokuhlola yobungcweti
Izinzuzo ze-R & D
Amalungu angaphezu kwama-20 e-R & D. Ukwandisa utshalomali ocwaningweni lomkhiqizo nentuthuko.
Inzuzo Yangemva Kokuthengisa
Sineqembu elincane lokusekela ngomdlandla lokuxhaswa kwe-inthanethi ngesikhathi sangempela Ama-Max 4 amahora 'isilinganiso sempendulo esheshayo Ukuxhaswa kwevidiyo kwalo lonke uhlobo lwesixazululo senkinga Isilinganiso esiphakeme soxhaso lwe-inthanethi oluvela kubasebenzisi abakhona.
Kunezindlela eziningi zokuxhumana nathi .Sibhalele noma yini maqondana nesifiso sakho. Sihlala sikunye nawe ukunikeza insizakalo yethu enhle kakhulu. U-EcubMaker Ukholelwa ekwanelisekeni kwamakhasimende. Sinikeze ithuba lokukukhonza.
Silandele kuma-Social Media wethu ukuze uthole ulwazi olusha mayelana neMikhiqizo yethu nokunikezwa okusha.